ILIFE H70၊ သင်ရှာနေသည့်ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက် Gadget သတင်းများ
Rafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | ယေဘုယျ, နေအိမ်
အလိုအလျောက်ဖုန်စုပ်စက်များ၏ "ဖက်ရှင်" သည်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်ဟုတ်သည်မဟုတ်လော။ ဒါပေမယ့်တပြိုင်နက်တည်းသူတို့ကပွင့်တယ် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ကောင်းပေးနိုင်သောအခြားဖုန်စုပ်စက်များ အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် အလွန်ရှည်လျားသောကြိုးများပါ ၀ င်သောကြီးမားသောဖုန်စုပ်စက်များသည်သမိုင်းတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်မှာရှင်းပါသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကစျေးကွက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထူထောင်တယ် ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက်များမရ။ ဒီနေ့ငါတို့အကြောင်းပြောကြမယ် ILIFE H70.
ဖုန်စုပ်စက်၏သဘောတရား ဘဲဥပုံယာဉ်ငယ်တစ်စင်းသည်အသက်ပြင်းပြင်းရှူသည်ကိုမယုံသူများအတွက် အိမ်၏ထောင့်တိုင်း ပြောစရာမလိုပါဘူး “ conga” အမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက်နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်ကြားတွင်တွေ့နိုင်သောပါဝါခြားနားချက်မရ။ လူများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ် (သို့) ရုံးခန်းတိုင်းကိုအလွန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
1 ILIFE H70 သည်အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အဖြေဖြစ်သည်
2 သင်၏အိမ်အတွက် ILIFE H70
ILIFE H70 သည်အိမ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အဖြေဖြစ်သည်
သင်တစ် ဦး ခံစားရန်ကြိုက်လျှင် အိမ်မှာသန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းအတွက်သန့်ရှင်းရေးကိုသင်စိတ်ပူသည်၊ တတ်နိုင်သမျှအကူအညီများစွာရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေများထဲမှကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်အကြောင်း ILIFE H70ဖုန်စုပ်စက်တစ်လုံး၊ ကြိုးမဲ့၊ စွယ်စုံ သုံး၍ လုံလောက်သောပါဝါထက်ပိုသည်မရ။ အိမ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းအစများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။
သူ့ကိုကိုင်ပါ ILIFE H70 ဖုန်စုပ်စက် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဖုန်နှင့်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည် suction power နှစ်မျိုးရှိသည်မရ။ စွမ်းအား သာမန်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားဖြင့်မည်သည့်အခြေအနေအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးသည် ၁၀ Kpaမရ။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ mode ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ် အများဆုံး ငါတို့သည်၎င်းထက်နှစ်ဆပိုစုပ်ယူနိုင်သောစွမ်းအားကိုရရှိလိမ့်မည် ၁၅ Kpaထို့ကြောင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်မှုန့်မရှိ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစွမ်းထက် brushless မော်တာ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်သောပါဝါအားလုံးကိုအသံတိတ်ဆုံးနည်းဖြင့်ရရှိလိမ့်မည်။ တစ်ခုနှင့်ရေတွက်ပါ ၁.၂ လီတာအထိဆံ့သောလွယ်ကူသောအမှိုက်ပုံးမရ။ ပြီးတော့သူ့အားလုံး အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုတ်။ လျှော်နိုင်သည် ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲမှာတောင် ၎င်း၏ရှည်မျောမျောပုံသဏ္န်နှင့် ergonomic လက်ကိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြမ်းပြင်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရုံသာမကဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်များသို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်များအထိပင်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏အိမ်အတွက် ILIFE H70
ဖုန်စုပ်စက်တစ်လုံးရချင်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပါ။ ILIFE H70 သည် 2500 mAh ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်မရ။ ငါတို့ကိုမင်းခွင့်ပြုမယ့်အခကြေးငွေ မိနစ် ၄၀ အထိဆက်တိုက်သုံးပါ "ပုံမှန်" mode မှာ ပြီးတော့ငါတို့ဘာရနိုင်လဲ ၅ နာရီအတွင်း ၁၀၀% ထပ်မံအားသွင်းသည်.
အ မည်သည့်သန့်ရှင်းရေးအမျိုးအစားအတွက်မဆိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများa၊ ဦး ခေါင်း၏ချောမွေ့မှုအပြင်ပရိဘောဂများနှင့်နံရံများကိုမပျက်စီးစေသောပစ္စည်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းသည်၎င်းကိုအဆုံးစွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ၁၈၀ ဒီဂရီအထိလှည့်ပါ ထိုင်ခုံများသို့မဟုတ်စားပွဲခြေထောက်များကိုမသန့်ရှင်းစေပါ။ သူ့မှာရှိတယ် အမြင်အာရုံအားနည်းသူများအတွက် LED မီးများဖြင့်မီးထွန်းပါ.
အဆိုပါ အကယ်. ILIFE H70 ကြိုးမဲ့လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် သင်ရှာနေသည့်အရာဖြစ်သည် Aliexpress တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်ပိုင်ပါစေ ပို့ဆောင်ခမယူဘဲ မင်းရဲ့အိမ်ကထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းသန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေဖို့နောက်ထပ်မစောင့်ပါနဲ့။ ပြီးတော့အဲဒါရှိတယ် အဆုံးစွန်သောသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ လိုအပ်တာထက်ပိုသုံးစရာမလိုဘဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ILIFE H70၊ သင်ရှာနေသည့်ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက်